Sandisk dia mandefa ny kapila USB misy WiFi | Vaovao IPhone
Ny fifandraisana tsy misy tariby dia tsy ny ho avy intsony, io dia ampahany amin'ny ankehitriny ary manana porofo misimisy kokoa momba izany isika isan'andro. SanDisk, antoka amin'ny resaka fahatsiarovana avy any ivelany, dia nandefa ireo tsangambato fahatsiarovany USB vaovao misy fifandraisana WiFi. Amin'ny haben'ny fahatsiarovana karazana "pensilihazo" dia mampiditra tahiry 16 na 32Gb, arakaraka ny safidinao, radio WiFi izay ahafahanao mamorona tambajotra hampifandray ireo fitaovanao, ary bateria manana fizakan-tena 4 ora milalao horonantsary mivantana amin'ny findainao.
Araka ny asongadin'ireo fepetra aroson'ny fitaovana dia tsy ilaina ny mampifandray Internet, satria ny Sandisk Wireless Flash Drive dia mamorona tambajotra WiFi misy azy. mampifandray fitaovana 8 hafa, mifanaraka amin'ireo fitaovana iOS (iPad, iPhone, iPod Touch), fitaovana finday hafa (Android, Kindle), ary solosaina Mac sy PC. Ny sarany tokana dia hanome anao fizakan-tena mandritra ny 4 ora, ampy hijerena ny sarimihetsika voatahiry ao an-tsainy, ary mamela hatramin'ny ony 3 miaraka, mba hahitan'ny tsirairay izay tiany indrindra. Raha lany ny baterinao dia tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny USB rehetra amin'ny solosainao fotsiny izany, na avy amin'ny lozisialy fiara ary hasiana herinaratra hampitomboana ny fizakan-tenany.
Ny famindrana rakitra amin'ny fitaovana na ny fijerena azy ireo dia tsotra noho ny fifandraisana USB na ny azy Fampiharana iPhone sy iPad azo alaina maimaimpoana ao amin'ny App Store. Ny tsy fahampian'ny fifandraisana USB dia tsy olana intsony raha mbola manana fifandraisana WiFi ianao noho ireo fitaovana toa an'ity. Ny vidiny? Eny, tsy nisy nanitatra noho ny fiasa: $ 59,99 ho an'ny kinova 32GB, ary $ 49,99 ho an'ny kinova 16GB. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mamandrika azy io fotsiny amin'ny tranokalan'i SanDisk na dia tsy ho ela dia ho hita ao Amazon koa izy io. Raha liana amin'ireo fitaovana ireo ianao dia jereo Seagate Wireless Plus dia nandinika ny bilaogy izahay, miaraka amin'ny fahaiza-manaony 1TB.
Fanazavana fanampiny - Seagate Wireless Plus 1TB (II) WiFi Drive Review: Rindrambaiko sy fiasa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Sandisk dia mandefa ireo kapila USB misy WiFi
Lords of Blood - Vampir RPG: lalao filalaovana eo anelanelan'ny vampira sy werewolves
HomeArtwork: ovao ny sary an-tsary miaraka amin'ilay rakikira nolalaovina